ZIDOO H6 PRO 6K တီဗီသေတ္တာမှစျေးနှုန်းသတ်မှတ်သည် ...
အစဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ technique ကိုTV နဲ့ TV ကို set ကို-top boxIsidore H6 6K PRO တီဗီ box ကိုနောက်ဆက်တွဲ
စျေးနှုန်းသမိုင်း Isidore H6 2GB PRO / 16GB တီဗီ BOX
€ 91,36 - မေလ 2020, 11
€ 91,52 - Aprilပြီလ 2020, 28
€ 91,09 - Aprilပြီလ 2020, 20
€ 90,51 - Aprilပြီလ 2020, 13
€ 91,71 - Aprilပြီလ 2020, 7
€ 89,08 - မတ်လ 2020, 31
€ 92,67 - မတ်လ 2020, 23
€ 88,67 - မတ်လ 2020, 16
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 99,00 - ဇွန်လ 2019, 13
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 87,06 - မတ်လ 2020, 10
Isidore H6 Pro ကို YouTube ကို 4K တီဗီ Box ကို Full HD ကို Netflix နဲ့လွှ
Isidore H6 2GB PRO / 16GB တီဗီ BOX
UBOX PRO တီဗီ Box ကို Android မှာ 7.0 1GB RAM ကို + ROM ကို 16GB
Isidore H6 7.0 PRO Android တီဗွီ Box ကို Allwinner H6 2GB DDR4 16GB EMMC
AllWinner H6 Quad-core ARM Cortex ပရို TM အလိုအလျောက် -A53
H6 PRO CortectA6 ဗိသုကာဖြစ်ပြီး 53GHz ဦးရေအများဆုံးမှာအလုပ်လုပ်ပြီးဘယ် Allwinner H1.8 အသစ်က Quad-core High-end မာစတာ chip ကို, ်ပေးရန်, ထို့အပြင် chip ကို H6 PRO အားကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်ရန်ဒီကုဒ်တို့သည်ကြီးစွာသောနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ပိုနည်းလမ်းများနှင့်အတူ, အန်းဒရွိုက် Nougat သေးငှက်ကလေးလွှတ်ပေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာမဟုတ်ဘဲနောက်ဆုံး version marshmallow ထဲကနေအခြေခံကျကျအမျိုးမျိုးဖြစ်ခြင်းထက်ထင်ရှားတဲ့အသုံးပြုသူ-facing features တွေလက်တဆုပ်စာထည့်ပေးသည်။ Despi ယင်းတိုးတက်လာသော multitasking ကိုအနားတဝိုက်အပြောင်းအလဲခဲ့ - ဒါပေမဲ့ဒါက shouldnt အောက်မှာပိုကြီးအပြောင်းအလဲများကိုလည်းအန်းဒရွိုက်ပိုမြန်ပြီးပိုလုံခြုံစေရှိပါတယ်။
DDR4 2GB RAM ကို eMMC Flash ကို 16GB
ဒါဟာအဆုံးစွန်တဲ့ချမ်းသာ End-user အတွေ့အကြုံကိုပို့ဆောင်ခြင်း, eMMC မှတ်ဉာဏ်မှရသည်ဟု, စွမ်းဆောင်ရည်, လုံခြုံရေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအတွက်အကျိုးရှိ DDR4 2GB RAM နှင့် 16GB eMMC Flash ကိုဝါကြွားတတ်။
802 ။ 11AC WIFI & LAN 1000M
H6 PRO 802 တပ်ဆင်ထားသည်။ 11AC WIFI မော်ကျူးများနှင့် built-in ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်းဖို့က high-အမြတ်အင်တင်နာနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, H6 PRO 1000M LAN adapter နဲ့တပ်ဆင်ထားသည်, သင့်အိမ်ကွန်ယက်တွင်ပြန်ဖွင့်ထဲမှာချောခံစားပါ။
4K က Ultra High Definition
H6 PRO 4K @ 60fps UHD လက်ငင်းထောက်ခံပါတယ်, နှင့်အစွမ်းထက် chip ကိုအားလုံးရုပ်ရှင် 4K ကစားရန်နိုင်သူဖြစ်ရမည်ဖြစ်၏ 4K သင်တို့ရှိသမျှအသေးစိတျ၏စင်ကြယ်အမြင်ပျော်မွေ့ Enable ဘယ်4ကြိမ် 1080P ရုပ်ပုံအရည်အသွေးသည်ထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည်။
Isidore H7.0 Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အန်းဒရွိုက်6နှင့်အတူအစွမ်းထက်တီဗီ Box ကို
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Isidore H6 6K PRO တီဗီ box ကိုနောက်ဆက်တွဲ
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Isidore, မော်ဒယ်: H6 PRO အမျိုးအစား: တီဗီ box ကိုအရောင်: ရှန်ပိန်ရွှေ
OS ကို: အန်းဒရွိုက် 7.0, CPU ကို: AllWinner H6 Quad-core ARM Cortex TM အလိုအလျောက် -A53 ပရို, GPU ကို: မာလီ-T720MP2 မှတ်ဉာဏ်: 2GB DDR4, ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု: 16GB eMMC
wifi ဆက်သွယ်မှု: WIFI 802.11AC Ethernet: * RJ-1 45 Ethernet jack (10 / 100 / 1000Mbps) ဘလူးတုသ်: ဘလူးတုသ် 4.1
video decode: HDR10 နှင့် HLG ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ H265 / HEVC Main / Main10 profile@Level5.2 အဆင့်မြင့်၊ 4K @ 60fps, 6Kx4K @ 30fps အထိ၊ H264 / AVC BP/MP/HP@level5.1, MVC, 4K @ 30fps, VP9, ​​ပရိုဖိုင်း 0/2၊ 4K @ 30fps, VP6 / VP8, 1080P @ 60fps, MPEG1 / MPEG2 SP @ ML, MP @ HL, 1080P @ 60fps, MPEG4 SP @ level0~ 3, ASP @ level0~ 5, GMC၊ တိုတောင်းသောခေါင်းစီးပုံစံ၊ 1080P @ 60fps, AVS + / AVS JIZHUN ပရိုဖိုင်း @ level 6.0, 1080P @ 60fps, VC-1 SP @ ML, MP @ HL, AP @ level0~ 3, 1080P @ 60fps, Support Frame Buffer Compression (FBC)၊ Output pixel format ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ YUV420 / YV12 / NV12 / ... , အသံဒီကုဒ်:၊ MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / AC3 ​​/ DTS / FLAC / APE၊ ရုပ်ပုံဒီကုတ်၊ : HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF
HDMI ထဲက HDMI နျ Standard @ 2.0hz 60, USB မှတ် 1TB မိုဘိုင်း HDD, 3.0 * TF ကဒ်စာဖတ်သူကို SD ကဒ် interface ကိုကျော်ချိတ်ဆက်ပါလျှင်လိုအပ်2* USB2.0, 1 USB1 * * ပြင်ပပါဝါ။ ပံ့ပိုးမှု 1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB, 1 * မှာ IR လက်ခံ, 1 * AV စနစ် OUT Composite ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်ပို့တ် (CVBS output) 1 * Optical (2CH, 5.1CH)
dimensions & အလေးချိန်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (L ကိုက x W x ကို H ကို): 179x144x65mm -Product အလေးချိန်: 0.62kg
* တီဗီ box ကို 1, 1 * Bluetooth ကိုဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု, HDMI cable ကို * 1, 1 * ပါဝါ adapter * အသုံးပြုသူကို manual 1
Isidore H6 6K PRO တီဗီ box ကိုနောကျဆကျတှဲဗီဒီယိုများ
ပတေရုသ Istvan - 2019 10 ဇွန်
- အလွန် Allwinner ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က CPU ကိုအတူနိုင်စွမ်းကစားသမား - Isidore Media Player ကိုအတူကဘာမှ play နိုငျသညျ, 4K HDR ကိုအလိုအလျောက် Frame ကနှုန်း switching နှင့်အတူထောက်ခံ! - မဟာအထောက်ခံမှု, ထုတ်လုပ်သူများထံမှမကြာခဏမွမ်းမံမှုများ - Bluetooth ကိုဝေးလံခေါင်သီ - အလိုလို user interface ကို - ဂရိတ်အရည်အသွေးကို HDMI cable ကိုထည့်သွင်း - 3.0 က USB port ကို, Gigabit LAN, Wi-Fi, AC ငါကအကောင်းဆုံးသတင်းမီဒီယာပလေယာယနေ့တဦးရဲ့စဉ်းစား! - Kodi ကစားသမားချောမွေ့မဟုတ် - တိုင်အဘယ်သူမျှမ DTS-HD ကိုထောက်ခံမှု Isidore Media Player ကို app ကို (တိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်) ထဲမှာ - အဘယ်သူမျှမ function ကို airmouse
သူ Mike Barton - 2019 10 ဇွန်
ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကထဲကနေဝယ်ယူဒါက Isidore X9S လည်းရှိ Gearbest။ အဆိုပါ H6 ငါ X9S နှင့်အတူရှိခဲ့, ငါ, ငါ့မူလတန်းတီဗီသေတ္တာအဖြစ် X9S အစားထိုးအသုံးပြုဖူးတဲ့အသေးစားကိစ္စများအချို့အမှာစကားပြောကြား။ အလွန်အစာရှောင်ခြင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကျင့်ကိုကျင့်။ အလွန်ယေဘုယျအားဖြင့် Isidore ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူပျော်ရွှင်, နှင့်ထံမှစျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ဝေအတွက် Gearbest။ ဝယ်ယူပြီးနောက် Isidore ထံမှအပ်ဒိတ်လည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ။
Xiaomi က Mi တီဗီ432 လက်မတီဗီ (a 1366 768, Android OS, 1GB RAM ကို)